थप एक जनामा कोरोना पु`ष्टि, संक्र`मितको संख्या ४९ पुग्यो – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/थप एक जनामा कोरोना पु`ष्टि, संक्र`मितको संख्या ४९ पुग्यो
थप एक जनामा कोरोना पु`ष्टि, संक्र`मितको संख्या ४९ पुग्यो
काठमाडौं- शुक्र`बार थप एक जनामा कोरोना संक्र`मण पु`ष्टि भएको छ । स्वा`स्थ्य मन्त्रा`लयका अनुसार झापाका ६२ वर्षीय पुरुषमा संक्र`मण पु`ष्टि भएको हो । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा उनमा संक्र`मण देखिएको हो ।
उनी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रा`लयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसं`ख्या मन्त्रा`लयका सह-प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको हालसम्म ४७ हजार ४९६ जनाको परी`क्षण गरिएको छ । जसमा पि.सि.आर. विधिबाट नौ हजार ४०७ र र्‍यापिड डायग्ने`स्टिक टेस्ट प्रवि`धिबाट परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या` ३८ हजार ८९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रा`लयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ७९१ नयाँ प्रयोगशाला परीक्ष`ण भएको जानकारी दिइयो । क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिको सङ्ख्या` हालसम्म १२ हजार ९८५ छ भने आइसोलेसनमा रहने सम्भावित सङ्क्र`मितको सङ्ख्या ८९ जना रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा तीन र उपत्यका बाहीर ८६ जना रहेका जानकारी गराइएको छ । त्यसैगरी हाल कोभिड १९ को रेड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या २८७ पुगेको छ ।दश जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।